बालबालिकाको लागि नशा जस्तै बनेको मोबाइल, टिभीले आँखामा गम्भीर असर, सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्न विशेषज्ञको यस्तो छ सुझाव... - Ankuran Khabar
बालबालिकाको लागि नशा जस्तै बनेको मोबाइल, टिभीले आँखामा गम्भीर असर, सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्न विशेषज्ञको यस्तो छ सुझाव…
२०७७ श्रावण २९0
कोरोना भाइरसका कारण अहिले विश्वनै त्रसित छ । कोरोनाकै कारण लाखौंले ज्यान गुमाएका छन भने, करोडौं संक्रमित भएका छन् । यसको समाना नेपालले पनि गरिरहेको छ । कोरोनाबाट बच्न भन्दै नेपालमा गत चैतदेखि जारी लकडाउनले उद्योग,कलकारखाना, शिक्षा लगाएत व्यापार व्यावसाय बन्द हुँदा मानिस घरमै बसका छन् । अहिलेको अवस्थामा धेरैले सूचनाका लागि होस् या मनोरञ्जनको लागि घरमा समय विताउने सबै भन्दा सहज माध्यमको रुपमा मोबाइल, आइप्याड, ल्याप्टप,टिभी लगाएत विद्यु्तीय माध्यमलाई प्रयोग गरेका छन् ।
विद्यालय बन्द हुँदा अहिले बालबालिकाको सबै भन्दा बढी समय वित्ने गरेको छ, मोबाइल,आइप्याड,ल्याप्टप र टिभीमा । अभिभावकको व्यस्तता तथा लाप्रवाही र विद्यालयहरुले सञ्चालन गरेका अनलाइन कक्षाका कारण पनि बच्चाहरुले यस्ता कुरामा बढी समय विताउने गरेको पाइन्छ । तर यसले बच्चाको स्वास्थ्य, त्यस माथि पनि आँखामा गम्भीर असर पार्दै गएको छ । लगातार यस्ता सामग्री हेर्दा बच्चाको आँखामा के कस्तो असर पर्छ ? बच्चाको आँखामा समस्या आएको कसरी थाँहा पाउने ? यसबाट कसरी जोगाउने ?तथा बच्चाको आँखा स्वस्थ राख्न के कस्तो सावधानी अप्नाउनु पर्छ ? अंकुरण खबरका लागि वरिष्ठ आँखा रोग विशेषज्ञ डा.पारस पञ्जियारसंग गरेको कुराकानीमा आधारित अंश …
अहिलेका अधिकांश बालबालिकालाई मोबाइल, आइप्याड, ल्याप्टप,टिभी अम्मल जस्तै बनेका छन् । त्यस माथि पनि कोरोनाको यो विषम परिस्थितिमा यी साधानको लगातारको प्रयोगले बच्चाहरुको आँखामा त दीर्घकालसम्म गम्भीर प्रकारका असर परेको छ नै मष्तिस्क, शारीरिक विकास र वृद्धिमा पनि धेरै असर गरेको छ । बच्चालाई अम्मली बनाउने कुरामा पनि अभिभावकै कमोजी रहेको पाइन्छ ।
बच्चाको आँखामा समस्या आउदा यस्ता लक्षण देखिन्छन् :
आँखा धेरै झिम्काउने वा धेरै माँड्ने
टाडाको कुरा प्रष्ट नदेख्ने ।
मोबाइल वा टिभी धेरै नजिकबाट हेर्ने
थोरै परको बस्तु हेर्दा आँखा सानो पारेर वा घाँटी खुँम्चाएर हेर्ने ।
विशेषतः लामो समय मोबाइल, आइप्याड, ल्याप्टप,टिभी हेर्दा बच्चाको आँखामा यस्ता असर पर्न सक्छ :
सामान्य अवस्थामा प्रतिमिनेट बच्चाले १४-१५ पटक आँखा झिम्काउछन् । यसो गर्दा आँखा सुख्खा हुन पाउदैन् । तर लामो समय यस्ता कुरा हेर्दा वा आँखा नझिम्काई हेर्दा आँखा सुख्खा भई दृष्टिदोष (रिफ्राक्टिभ एरर) को समस्या हुने ।
मधुरो देख्ने ।
आँखाको अगाडी कालो देख्ने ।
बच्चाको आँखा कलिलो भएकाले पुरै सेपमा नबसेकाले पछि झनै समस्या आउने हुन्छ ।
तौल बढ्ने ।
बच्चाहरु मोबाइल बिना एक ठाँउमा शान्तले नबस्ने ।
बिना मोबाइल सुस्त जस्तो बन्ने ।
पढाइ, लेखाइमा ध्यान नदिने ।
बढी रिसाउने ।
एक्लोपना मनपराउने बानी बस्दै जानसक्छ । यस्ता असर दीर्घकालसम्मका लागि निकै घातक कुरा हो ।
आँखामा यस्तो समस्या आउन नदिन के गर्ने ?
सबै भन्दा पहिला त यस्तो समस्याबाट बचाउन मोबाइल, आइप्याड,भिडियो गेम, ल्याप्टप,टिभी नहेर्नीनै हो । तर अहिलेको युगमा मोबाइल, आइप्याड,भिडियो गेम, ल्याप्टप,टिभी बिना बच्चाको समय अनुकुल ज्ञान, र मनोरञ्जनको साधानमा कमी हुन सक्छ । यस अर्थ पनि बच्चालाई मोबाइल, आइप्याड,भिडियो गेम, ल्याप्टप,टिभी प्रयोग गर्न त दिनु पर्छ तर सिमित समय र सावधानी अप्नाउदै ।
यसो गर्नाले बच्चाको आँखालाई स्वस्थ राख्न सकिन्छ :
लगातार बढीमा १ डेड घण्टा भन्दा बढी यी साधानको प्रयोग गर्न नदिने ।
मोबाइल,आइप्याड,ल्याप्टप हेर्दा कम्तीमा १ फिट दुरी कायम गर्ने । त्यस्तै कम्प्यूटर हेर्दा २ फिट र टिभी हेर्दा १० फिट दुरी कामय गर्नु राम्रो हुन्छ ।
बच्चालाई यस्ता सामग्री चलाउदा अध्यारोमा नभै प्रशस्त उज्यालो भएको ठाउँमा चलाउन दिने ।
कम्तीमा ३० मिनेटमा एक छिन ब्रेक गर्दै चलाउने ।
सिधा घामको प्रकाश आँखामा नपारी घाममा लगेर खेलाउने वा बच्चासंग बस्ने ।
खुल्ला स्थान वा अझ हरियाली भएको ठाँउमा सकेसम्म दिनको १ दुई घण्टा खेलाउने यसो गर्दा बच्चाको आँखालाई मात्र नभएर पुरै शरीरलाई फाइदा पुग्छ ।
यसको साथै स्वस्थकर खानपान जीवन शैली अप्नाई बच्चा जन्मेको ३ महिना भित्र कम्तिमा एकपटक,त्यस पछि ३ वर्ष भित्र र पछि ६-६ महिनामा बच्चाको आँखा नीयमित परीक्षण गराउनु पर्छ । यदि बच्चाको आँखामा अन्य समस्या भए चिकित्सकको सल्लाहा बामोजिम जुनसुकै बेला परीक्षण गराउनु पर्छ ।
(डा.पञ्यिार ईशान बाल तथा महिला अस्पतालमा कार्यरत छन्)
सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीश आइसोलेसनमा